France oo Diyaaradaheeda Dagaalka Maalintii Labaad Duqeyn Culus ku Haya Saldhigyada Islaamiyiinta Mali (Sawirro) | IshaBay Dhaba
France oo Diyaaradaheeda Dagaalka Maalintii Labaad Duqeyn Culus ku Haya Saldhigyada Islaamiyiinta Mali (Sawirro)
Diyaaradaha dagaalka Dowlada Faransiiska gaar ahaan kuwooda loogu yeero, (Rafael’4) ayaa duqayn laxaad leh maalintii labaad ku haya, saldhigyo xoogaga Islaamiyiinta dalka Mali ku leeyihiin waqooyiga dalkaas, kuwaas oo sida wararku sheegayaan loo gaystay duqayn aad u culus.
Sida wakaalada wararka Faransiiska ee AFP ay ku warantay meelaha sida daran loo duqeeyay waxa ka mid ah magaalooyinka, Nambala, oo ku taala meel aan boqol km ka fogayn xuduuda uu dalkaasi la wadaago dalka Mauritania iyo magaalada Dwintsa, taas oo 800 km dhinaca waqooyi kaga beegan caasimada dalkaas ee Bamako.
Dad goob joog ah ayaa iyaguna wakaaladaha wararka dunida u xaqiijiyay in raxan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Helicopter-ka ay duqeeyeen magaalada Gao oo iyadu xudun u ah kooxaha Islaamiyiinta ah sababtoo ah, waxa ay magaaladaasi halbowle iyo marin istaaraatiji ah u tahay, sahayda iyo gurmadka oo ay waraabin karto waqooyiga dalkaas oo dhan sida la aaminsan yahay.
Jean-Yves Le Drian oo ah Wasiirka gaashaandhiga Faransiiska ayaa isna xaqiijiyay weeraradaas kuwaas oo uu bayaan ku soo saaray, isla markaana sheegay in diyaaradahooda dagaalku burburiyeen wax uu ugu yeeray xerooyinka milatari ee xoogaga Islaamiyiinta Maali.
Jean-Yves Le Drian ayaa intaa ku daray in ciidamadiisu ay fooda is dareen oo ay si adag u wada dagaalamayaan kumanaan ka tirsan xoogaga Islaamiyiinta ee dalka Mali dhiniciisa Waqooyi gacanta ku haya, kuwaas oo ay ku andacoonayaan Faransiisku in ay magaalooyin iyo saldhigyo muhiim ah durba ka qabsadeen.